सचेत होउँँ, गर्मीसँँगै बन डढेलो बढ्दैछ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / सचेत होउँँ, गर्मीसँँगै बन डढेलो बढ्दैछ
सचेत होउँँ, गर्मीसँँगै बन डढेलो बढ्दैछ
Posted by: युगबोध in विचार May 13, 2019	0 50 Views
अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तनका कारण यो साल मौसम तीब्ररुपमा परिवर्तन भइरहेको छ। हुन त यो गर्मीको समय हो। तर पनि पानी र हिउ“ परिरहेको कारण चिसोपन कायमै थियो। फानी तुफानले पनि वर्षात र हिमपातमा बृद्धि गरेकै थियो। तर एक हप्ता जति भयो गर्मी अत्यधिक बढेको छ। यो अझ बढ्ने संकेतहरु देखिरहेका छन्। जसले गर्दा तराईतिर लु (तातो) हावा चल्ने सम्भावना बढी देखिइरहेको छ। वनमा डढेलो लाग्ने र फैलने क्रम बढ्दो छ। यो अझ व्यापक हुने सम्भावना छ। अहिलेसम्म धेरै घर र गोठ यसको चपेटामा परिसकेका समाचार आइरहेका छन्। वनमा आगो प्राकृतिक रुपमा पनि लाग्छ भने मानिसले घा“स दाउराको लागि पनि आगो लगाउने गर्दछन्। यति मात्रै होइन, शिकारीहरुले जनावरलाई मार्न आगो लगाउने गर्दछन्। यसको अलावा चुरोट खाएर जथाभावी फाल्दा पनि आगो लाग्ने गर्दछ। जति गर्मी बढ्छ त्यति नै आगोले ठूलो रुप लिने गर्दछ। त्यसकारण सामुदायिक वन उपभोक्ता, डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय सरकार चनाखो बन्नुप¥यो। वनमा आगो लाग्ने बित्तिकै निभाउनतिर लाग्नुपर्दछ। वनको डढेलो गाउ“ वस्तीमा पस्यो भने धनमालको क्षति मात्र होइन मानवीय क्षति पनि अकल्पनीय रुपमा हुन सक्छ। यसको अलावा हाम्रो वायुमण्डलमा कार्वनडाइअक्साइड अत्यधिक मात्रामा उत्सर्ग हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो जलवायुलाई झन नराम्रोस“ग प्रभावित बनाउ“छ। अझ जैविक विविधताको विनाश गर्दछ। हाम्रा वन्यजन्तु गम्भीर संकटमा पर्दछन, अरबौ रुपैया“ जलेर नष्ट हुन्छ। त्यसैले वनको डढेलोप्रति सचेत बनांै । आफ्नै दायित्व र कर्तव्य सम्झी सूचना प्रवाह गरौं र आफू पनि निभाउन लागिपरांै।
गत शुक्रवार भारतीय मौसम विज्ञानले उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात जस्ता ठाउ“हरुमा तापक्रम ५० डिग्रीभन्दा माथिसम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले सावधान रहन आग्रह गरेको छ। सरकारले पनि राहतको लागि प्रदेश सरकारलाई भनिरहेको छ। बिहार उत्तर प्रदेशमा गर्मी बढ्नु भनेको नेपालको तराईमा पनि बढ्नु हो। त्यसैले लु (तातो हावा) चल्नेछ। मानिसको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनेछ र शुद्ध पिउने पानीको समस्या बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा रोगव्याधी बढ्ने निश्चित छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तयारी अवस्थामा बस्न जरुरी छ। सानो गल्तीले गाउ“हरु नै पूरै जलेर नष्ट हुन सक्छन्। त्यसैले जनचेतना फैलाउनतिर लाग्न ढिलाइ गर्नुह“ुदैन। सानो गल्ती र सरकारको लापरवाहीले अकल्पनीय जनधनको क्षति हुन जानेछ। हावा अत्यधिक तातो हुनु भनेको हावामा रहेको पानीको मात्रा सकिनु हो। त्यसैले आगो लाग्न सक्ने सबै चिजको सुरक्षामा लाग्न सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ। चुरोट खाएर जथाभावी फालियो भने ठूलो विपत्ति आउनेछ। त्यसैले सानो भन्दा सानो गल्ती कसैबाट नहोस् भन्नेबारे सबै क्षेत्र सजग हुनुपर्दछ। अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तनको कुप्रभाव हामीले झेल्नु परिरहेको छ।
अप्राकृतिकरुपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कुप्रभावहरु मानिसलगायत समस्त प्राणी र वनस्पतिले भोग्नु परिरहेको छ। यसमा पनि हाम्रो जस्तो सानो अविकसित देशहरुले गर्दै नगरेको अपराधको सजाय भोग्न विवश भइरहेका छन्। अझ भन्ने हो भने खा“दै नखाएको विषले तड्पिरहन विवश हु“दै गइरहेका छांै। भन्नुको मतलव पर्यावरण प्रदूषण गर्नेमा विकसित राष्ट्रको तुलनामा हाम्रो जस्तो देशको भूमिका शून्य बरा वर भन्दा पनि फरक नपर्ला। तैपनि हामी पनि दोषमुक्त छैनांै। वनजंगल डढेलो लागेर होस वा अत्यधिक पुराना गाडी प्रयोग गरेर होस् हामी पनि जिम्मेवार छांै। वन विनाश र अझ जैविक विविधता विनाशमा हामी पनि केही न केही मात्रामा दोषी छौ। यति मात्रै होइन, बढ्दो सहरीकरणले निम्ताएको फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि समस्या बढिरहेको छ। पछिल्लो समयमा त झन बढ्दो इ“टा उद्योग र सिमेन्ट उद्योग जस्ता उद्योगहरु खुल्ने क्रम बढिरहेकोले अब प्रदूषणको भागीदार हामी पनि हुनेछौं। चाहे जे होस् पर्यावरणीय समस्या सबैको साझा समस्या हो। त्यसैले यसको समाधान पनि साझा रुपमा नै खोजिनुपर्दछ। जति जति हामीले ढिलाइ गर्दछौं त्यति–त्यति मानिसको वर्तमान कष्टप्रद बन्दै भविष्य अन्धकार हु“दै जाने निश्चित छ।
एकाएक गर्मी यसरी बढेर गयो कि हाम्रो दाङ उपत्यकामा समेत लगभग ४४ डिग्री तापक्रम पुगिसकेको छ। शनिवारदेखि त झन दिउ“सो पिपलको रुखमुनि बस्दा समेत तातो हावा चलेको महसुस गर्नुप¥यो । झण्डै लु चलेझै भयो भने तराईतिर त झन हालत के होला ? तत्काल पानी परेन र बादल पनि आएन भने दाङ उपत्यकामा गर्मीले रेकर्ड तोड्ने सम्भावना देखिदैछ। यस्तो हुनुमा वर्षाै वर्षसम्म व्यस्त सडक खनेर धुले सडकमा रुपान्तरण गर्नु, क्रसर उद्योग खुलारुपमा चलाउनु, सिमेन्ट उद्योगले मापदण्ड पूरा नगर्नु, चुनढुंगा उत्खननलाई ब्यवस्थित नगर्नु, कोइला भण्डारण ब्यवस्थित नगर्नु, इ“टा उद्योग अवैज्ञानिकरुपमा सञ्चालन गर्नु, साना सवारी साधन अत्यधिक मात्रामा बढ्नु आदि विभिन्न कारणले गर्दा दाङ उपत्यकामा तातो हावाको अनुभूति गर्नु परेको हो। उपरोक्त विषयहरुलार्ई व्यवस्थित गर्न गराउन स्थानीय सरकार एकदमै प्रभावशाली र दृढ इच्छाशक्तिका साथ समाधानतिर लाग्नुपर्दछ। प्रकृतिले दाङ उपत्यकालाई शीतल उपत्यका बनाइदिएको छ। त्यो कसरी भने दाङ उपत्यकाको पूर्व उत्तरदेखि पूर्व दक्षिण ह“ुदै पश्चिम बगेर पश्चिमको अन्तिम सिमानाबाट बगेर जाने बबै नदी दिएको छ। पश्चिम दक्षिणतिरबाट दाङ उपत्यकामा आउने तातो हावालाई बबई नदीबाट उड्ने पानीका बाफहरुले चिस्याइ दिन्छन्। तर सरकारको कमजोर कार्यनिति र हाम्रो अज्ञानता, लापवाहीका कारण उपत्यकालाई दिनप्रतिदिन बर्बाद बनाइरहेका छौं। त्यसैले स्थानीय सरकारले उद्योगधन्दामाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्दछ । आफूले पनि सडकलाई धुलाम्य नबनाइखन्ने बित्तिकै ग्रावेल वा कालोपत्रे बनाउनुतिर लाग्नुपर्दछ। जमिनको वर्गीकरण गरेर कृषि पेशालाई प्राथमिकता दिदै हराभरा जमिन बनाइ राख्नुपर्दछ। सडकका छेउहरुमा अनिवार्य वृक्षारोपणको अभियान चलाउनुपर्दछ। यस्तै गरी तालतलैयाको विस्तार र संरक्षण गर्नेतिर जनता र स्थानीय सरकार लागिपर्नुपर्दछ। वृक्षारोपणलाई व्यापकता दिउ“, संरक्षणका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौं।
‘हाम्रो दाङ हाम्रो शान’ भन्ने नारालाई सार्थकता दिन पर्यावरण र प्रकृति संरक्षणमा लागि परांै।
Previous: हामीमा नकारात्मक सोच किन बढ्दैछ ?
Next: सहमतीय संस्कृतिको खाँचो